Masuuliyiintii Komishanka Heer Degmo Ee Boorame Oo Xilkii Laga Qaaday | Araweelo News Network (Archive) -
Masuuliyiintii Komishanka Heer Degmo Ee Boorame Oo Xilkii Laga Qaaday
Boorame (ANN)-Masuuliyiintii Komishanka Doorashooyinka heer degmo ee Boorame ayaa laga qaaday xilkii ka dib markii lagu eedeeyey in kaadhadhkii codbixinta doorashada u gacan geliyeen qaar ka mid ah
masuuliyiinta Xukuumadda madaxweyne Rayaale, isla markaana ay sameeyeen ku tagri fal xilkii iyo masuuliyadii qaranka ay u hayeen.
Sidaana waxa laga soo xigtay qaar ka mid ah hawlwadeenada xarunta komishanka Boorame, kuwaas oo sheegay in gudoomiyihii komishanka Boorame Xasan Nuur Maxamed iyo ku xigeenkiisii C/llaahi Maxamuud Guuleed laga xayuubiyay xilkii. Ka dib markii ay soo baxeen fadeexado iyo musuqmaasuq ay ku kaceen masuuliyiintaasi.
Khadra Jaamac Maxamuud oo ahayd xoghayaha komishanka degmada Boorame ayaa iyadu is casishay, waxayna is casilaadeedu bedka soo dhigtay fadeexadaha iyo musuqmaasaqa ay ku kaceen masuuliyiinta komishanka Boorame.
Talaabada musuqmaasuq ee ay ku kaceen masuuliyiintaa ayaa ah tii ugu horaysay ee ay ku kacaan masuuliyiinta komishanku tan iyo markii la dhisay gudida doorashooyinka qaranka ee cusub, kuwaas oo iyagu magcaaba wakiilada iyo hawlwadeenada komishanka ee gobolada iyo degmooyinka. Mana jiraan ilaa hada wax wara oo ay gudida doorashooyinka qaranku kasoo saareen arrintaa. Balse waxa la filayaa in si deg deg ah loo magcaabo xubno cusub oo noqda masuuliyiinta heer degmo ee komishnaka doorashooyinka qaranka Boorame.